Fanatsarana Siri amin'ny iOS sy iPadOS 15 izay mbola tsy ampy | Vaovao IPhone
Fanatsarana Siri amin'ny iOS sy iPadOS 15 izay mijanona ho tsy ampy
Angel Gonzalez | 03/07/2021 10:00 | Nohavaozina amin'ny 30/06/2021 09:42 | iOS 15, Siri
Siri no ilay paoma virtoaly mpanampy fa mihaona folo taona ity 2021 ity. Nanomboka teo dia tsara ny fikasana hanatsara ny fanavaozana aorian'ny fanavaozana. Na izany aza, ny mpanatrika mpifaninana dia dingana iray alohan'i Apple hatrany ary i Siri dia iray amin'ireo singa tokony hatsaraina isaky ny fanavaozana lehibe. Taorian'ny WWDC 2021 izay nanehoana ny iOS sy ny iPadOS 15 dia nanandrana nampiseho ny ekipan'i Tim Cook roa amin'ireo tsara indrindra hampidirina ho Siri: ny mety hiseho mihazakazaka miasa tsy misy fifandraisana Internet ary ny Outsourcing ny mpanampy ny vokatra avy amin'ny antoko fahatelo. Saingy ampy ve ireo fanatsarana ireo? Sa mbola dingana iray ambadiky ny ambiny amin'ireo mpanatrika?
1 Siri offline sy amin'ny fitaovana an'ny antoko fahatelo, fanatsarana ampy?
2 Apple manokatra ny sisintanin'ny mpanampy azy ary miarahaba ireo vokatra avy amin'ny antoko fahatelo
Siri offline sy amin'ny fitaovana an'ny antoko fahatelo, fanatsarana ampy?
Apple te-hanokana fotoana avy amin'ny fihaonambe nasionaly ho an'ny developer ho an'i Siri, izay mpanampy azy virtoaly. Raha ny tena izy, nanao sonia ny fandrosoan'ny mpanampy tamin'ny taona lasa. Na izany aza, betsaka ny fampitahana misy amin'ny Internet izay avelan'i Siri mpanampy hafa toy ny Alexa na ny Google Assistant. Saingy ny lakilen'ny fahatakarana ireo fanatsarana ireo dia tsy amin'ny fampitahana. fa amin'ny fandrosoana amin'ny patanty izay hampidirina ao amin'ny iOS sy iPadOS 15.
Siri dia mampiditra fanekena feo amin'ny fitaovana iray ihany, ka ny audio amin'ny fanontanianao dia voahodina mivantana amin'ny iPhone na iPad anao. Midika koa izany fa afaka manao zavatra maro i Siri nefa tsy mila fifandraisana Internet.
Con iOS sy iPadOS 15 safidy izay nangatahina nandritra ny taona maro, saika hatramin'ny nanombohany tamin'ny 2011, dia tratra. afaka miantso hetsika Siri raha tsy misy fifandraisana Internet satria ny fifandraisana amin'ny mpizara Apple dia ilaina izao hamaranana ny fangatahana iray. Amin'izany no hahafahan'ny mpampiasa manao hetsika isan'andro tsy misy fidirana amin'ny Internet toy ny fametrahana fampahatsiahivana, fisokafana na fanidiana hetsika, fampahalalana momba ny fitaovana sns.
Ahoana ny fiasan'ny iOS 15 Search vaovao
Tanteraka izany noho ny fanodinana anatiny ny fangatahana ka tsy mila mampitaha ny fangatahana amin'ny mpizara azy i Siri. Na izany aza, tsy ny zava-drehetra dia lozisialy amin'ity asa ity satria Apple dia mitaky fepetra takiana ahafahana mampiasa ny mpanampy tsy misy Internet. Voalohany indrindra, mila izany chip A12 Bionic na taty aoriana ary misintona modely fitenenana. Ary farany, nampahafantatra ihany koa i Apple fa amin'ny alemà, kantonisy, sinoa mandarin, espaniola, frantsay, anglisy ary japoney ihany no misy azy.
Apple manokatra ny sisintanin'ny mpanampy azy ary miarahaba ireo vokatra avy amin'ny antoko fahatelo
Zava-baovao iray hafa nambara manodidina ny mpanampy virtoaly Cupertino dia ny Siri Outsourcing amin'ny vokatra avy amin'ny antoko fahatelo. Izany hoe, afaka mampiditra Siri amin'ny vokatra hafa tsy Apple, zavatra tsy azo eritreretina taona vitsivitsy lasa izay. Mba hanaovana izany dia handinika tsara ny tranga tsirairay i Apple mba tsy hilefitra amin'ny tsy fanarahan-dalàna na fanitsakitsahana fiarovana izay mety hanimba ny mombamomba ny mpampiasa.
Ireo vokatra avy amin'ny antoko fahatelo izay te-hiantsona an'i Siri dia voalaza fa tsy maintsy hisy Mifanaraka amin'ny HomeKit ary miasa miaraka amin'ny app Home amin'ny rafitra miasa Apple rehetra. Ho fanampin'izany, azo inoana fa mety mitaky mini-HomePod na HomePod izy ireo satria toa handefa ny fangatahana amin'ireo mpizara ny HomePod.
Mazava izany ireo fandrosoana rehetra ireo dia mampiakatra ny kalitaon'ny Siri be. Na izany aza, tsy ny zava-drehetra dia ireo fiasa extrinsika amin'ny fiasan'ny mpanampy, fa mbola lavitra ny lalana hahatratrarana azy fahaiza-miteny, fahamehana, fitenenana ary fanekena ny fampiasana azy ho an'ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 15 » Fanatsarana Siri amin'ny iOS sy iPadOS 15 izay mijanona ho tsy ampy
Amin'ny 27 Jolay, Apple dia hanambara ny valiny ara-bola amin'ny telovolana faharoa amin'ny 2021
Ahoana ny fametrahana ny beta ampahibemaso an'ny iOS 15 na iPadOS 15